warshad bacaha fudud ee Shiinaha Beyin xirxirida
Bacda jumladaha OEM ee Shiinaha
Noocyo kala duwan oo jajab ah ayaa la soo saari karaa, sida boorsooyinka istaaga, bacaha fidsan, bacaha hoose ee fidsan, iwm, waxay noqon kartaa dusha sare ee muraayad ama dusha sare ee matt, iyadoo leh ama aan lahayn jiinyeer ama daaqad, MOQ waxay ku saleysnaan doontaa cabbirka boorsadaada.
Shiinaha bacda salool caag jumlada ah
Boolbarada, oo ka mid ah cunnada fudud ee caanka ah, ayaa si ballaaran loogu soo dhoweeyey Yurub iyo Ameerika. In kasta oo loogu talagalay boorsooyinka saafiga ah ee gaarka loo leeyahay, dadku waxay doorbidaan midabka huruudka ah saldhig ahaan, maaddaama huruudku yahay midabka inta badan jecel saloolka. Ka sokow, dadka badankood waxay doorbidaan bacda shaabad gadaal sida sawirada hoose. Bacaha saloolka caadiga ah, dadku waxay jecel yihiin inay ku heystaan ​​dusha dhalaalaya, PET / FOIL-PET / PE, halka ay jiraan boorsooyin daangado leh oo loo baahan yahay in lagu buuxiyo nitrogen, ka dibna maaddada sida ugu wanaagsan u noqon kartaa PET / FOIL-PET / CPP. Qiyaas ahaan dhumucda, maadaama saloolku aad u fududahay, guud ahaan 60 mikroonoronku wuxuu u ekaan doonaa mid hagaagsan oo ku filan in la isticmaalo, laakiin dad badan ayaa jecel inay ka dhigaan boorsadooda mid tayo sare leh, sidaa darteed waxay isticmaalaan 80 mikroon, 100 mikroone, 120 mikroone iyo xitaa ka sarreeya
Bacda jerkey ee lo'da ah
Dadka intooda badani wali waxay doorbidaan inay istaagaan boorsooyinka biltong zip, iyadoon loo eegin wax bireed ama bilaa bireed, caag ama warqad, inta badan waxay jecel yihiin dusha sare, jiinyeer, mararka qaarkood dalool euro iyo daaqad. Dhumuc ka timaada 80-150 micron, sida caadiga ah 100 ama 120 micron ayaa kufiicnaan doona in la isticmaalo.
Bacda shukulaatada tayada sare leh ee Shiinaha
Boorsooyinka shukulaatada, dadka badankood waxay jecel yihiin 2 nooc, waxay u istaagaan boorsooyinka qufulka zip iyo bacaha gusset-ka dhinaca. Ma dhihi kartid inta ay ka fiican tahay, laakiin haddii awood yar, kaliya la soco boorsada taagan, halka awood weyn, bacda gusset side ay noqon doonto xulasho ka wanaagsan.
Shiinaha Shiinaha qeybiyaha
Markaad sameysid boorsada nacnaca, marka hore waxaad u baahan tahay inaad ogaato cidda kuu iibin doonta nacnac, markaa waxaad u baahan tahay inaad sameysid naqshado sax ah oo indhahooda lagu qabsado. Tusaale ahaan, carruurta badankood iskama celin karaan jiritaanka nacnaca, markaa sida carruurta looga dhigo sida nacnacadaada, marka hore same bacda nacnaca saxda ah, cidna ma ogaan karto waxa gudaha ku jira ka hor inta aysan furin boorsada. Carruurtu maxay jecel yihiin? Midabada quruxda badan, xayawaanka, ubaxa, wax walboo wanaagsan.